N'ihu InfraRed temometa Factory | China N'ihu InfraRed temometa Ndị Na-emepụta, Na-eweta
Amazon na erere temometa isi dijitalụ maka Baby nwere temometa infrared akwadoro
Emere Baby Thermeter na akwa ABS buru oke ibu maka ntukwasi obi na-adigide. Igwe ntị infrared dijitalụ a na ọkpọiso temometa nwere bọtịnụ ọrụ abụọ dabara adaba ma dịkwa mfe ịgbanwe ọnọdụ nha. Ngosipụta ọkụ LCD dị elu na-akwado ọgụgụ doro anya ọbụlagodi na ọnọdụ dị ala ma na-enwu gbaa. Temometa mercury Site na teknụzụ nyocha dị elu, nwatakịrị a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enye nsonaazụ a pụrụ ịtụkwasị obi na nke ziri ezi. Ọzọkwa, a na-enyocha nkwenye ahụike doro anya site na nkwado nke data gbasara ahụike na ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike. Igwe ntị infrared dijitalụ a na ọkpọiso temometa na-abịa na batrị AA abụọ na obere akpa maka nchekwa dị mma. Ọ nwere ike icheta ihe ruru ọgụgụ 20 ka ị wee lelee nkezi. A na-ejikwa temometa a na-ekpo ọkụ ọkụ nke nwatakịrị a na mkpu ọkụ.
Digital Oral temometa maka Ahụ Ọkụ Ahụ Ike Ọkụ na-ekpo ọkụ
Okpomoku onu onu na nke iproven nke umuaka na ndi okenye choro nani 10-20 sekọnd iji lelee oria oku. A na-anwale temometa ugboro ugboro ka ọ bụrụ nke ziri ezi na nha ọ bụla ị na-ewere. Were obere obere ọkụ gị dị jụụ, ọbụlagodi mgbe nwa gị na-adagharị na gburugburu. The temometa dijitalụ mgbanwe n'ọnụ na-akpụzi n'ọnụ gị mgbe ị bu n'obi iji temometa ọnụ.
Na kọntaktị na-enweghị kọntaktị infrared nwatakịrị maka ahụ ọkụ, Igwe ihu igwe nke ndị okenye
Ezubere temometa emere maka afọ niile, okenye, ụmụaka na ndị okenye. Na mgbakwunye na ịlele ọkpọiso, ọ nwekwara ike ịlele ụlọ, ihe, na mmiri mmiri. Ezigbo nhọrọ maka ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, họtel, ụlọ akwụkwọ. ℃ na ℉ na-adị mfe ịgbanwe.